Amazwi adibeneyo adibeneyo: Ngaba, Ieyure, kunye Nethu
Amagama amfutshane, iyure , kunye nesandi sethu esifanayo, kodwa intsingiselo yabo ayifani.
Isenzi yindlela ekhoyo yangoku "yokuba" (njengokuthi "Siyiqhawe").
Isibizo ilixa libhekisela kwithuba lemizuzu engama-60 okanye ixesha elithile lomini okanye ubusuku xa kwenzeka umsebenzi (njengokuthi "Usayi kuba neyure lakho eligqibeleleyo"). Jonga iziqulatho ezingezantsi.
Isichazi (okanye ukuzimisela ) sinokuthi "sinalo" (njengokuba "Le mihla yobomi bethu ").
"Akukho ziphelo ezivuyisayo.
Iziphelo ziyinxalenye edabukisayo. "
(Shel Silverstein, Yonke Into Kuyo .HarperCollins, 2011)
"Kukhona ezinye izinto ongazikwazi ukuzenza ngaphandle kokuphelisa ukuthandana, kunye nokukhwaza i-troll yezintaba ezilishumi elinambini yenye yazo."
(JK Rowling, uHarry Potter kunye noTywala weTywala , 1997)
"Esikhundleni sokuqala, uKatherine Merlin wayehleli yedwa waza wamamela umphathi othetha nabanye abasebenzi basehlabathini; amazwi abo ayekhanya kakhulu kwaye avuke ngeli lixa lentsasa."
(UMarta Gellhorn, "iMiami - eNew York." I-Atlantic Monthly , ngo-1948)
Ngomhla waseMgqibelo, ndiyakhumbula, ngosuku olumlilo olushushu kwaye kwakuyiyure apho mna nodadewethu sasiya ezitratweni kwivili. "
(Tennessee Williams, "I-Resemblance Between Case Violin kunye neCofin." Flair , 1951)
"Siyakukhusela abantwana bethu, abazali bethu, nabahlobo bethu ngokubaxelela inyaniso, kodwa kungekho njalo inyaniso epheleleyo."
(UFrances Jacobson Harris, Ndiyifumene kwi-intanethi: Ukuza kwe-Age Online ( ALA, 2011)
"Inkqubela yethu njengesizwe ayikwazi ukukhawuleza ngaphezu kwenkqubela phambili kwimfundo. Ingqondo yomntu iyisisiseko sethu ."
(UMongameli John F. Kennedy)
" Ingxaki yethu kukuba kukho izinto ezimbalwa ezinobungozi njenge-Basilisk venom, kwaye ziyingozi ukuba ziqhube kunye nawe."
(JK Rowling, uHarry Potter kunye ne-Deathly Hallows , 2007)
"Ithemba lethu ngekamva liye laphela kwizinga elithile kangangokuthi sinomngcipheko kwaye senze ihlazo xa sivuma ukuba sinethemba lokuba kusasa."
(Maya Angelou, Ileta kuMntombi wam .
Ibinzana emva kweeyure kuthetha ixesha elide emva kokusebenza ngokuqhelekileyo okanye iiyure zokusebenza. Ngokuqhelekileyo isetyenziswe ngokubhekiselele kwimivalo, ii-nightclub, ii-restaurants kunye nezinto ezifana.
"Kwixesha elilandela emva kweeyure , yonke into yayisetyenziselwa kwiikomityi zeplastiki. Bonke abathengi baqonda ukuba xa kwenzeka ukuhlaselwa babelindele ukuba baphonsa ngokukhawuleza iikomityi zabo emgangathweni, oko kutshabalalisa ubungqina bokusebenza emva kweeyure."
(Howie Carr, Hitman: Ibali elingaziwayo likaJohn Martorano, uTom Doherty, 2012)
Ilizwi elilishumi elinanye lixa lithetha ngomzuzu osandul 'umva ngaphambi kokuba uyeke kakhulu.
"U-Alice wenza esinye isandwichisi seeshizi. Wayengenakudla ubomi kwaye wayidla njengento ephosakeleyo, njengepilesi yesilwanyana ehlangulwa ngelixa leshumi elinanye ."
(Joy Williams, The Quick and Dead, 2000)
Ixesha elide emva kweyure (okanye iyure ngeyure ) lithetha ixesha elide.
"Isixhobo sabo sangempela sasingumbuzo ongenabuhlungu oqhubekayo, ngeyure emva kweyure , emnxusa, ebeka iintobe kuye, ephazamisa yonke into awayeyithethayo, ekholisa kuyo yonke inyathelo yokuxoka nokuchasana, de waqala ukukhala kakhulu kwiintloni nje ngokukhathala. "
(UGeorge Orwell, i- Ninetyen Engamashumi amane anesine , 1949)
(a) "Isicwangciso se- _____ akukho nto; ukucwangcisa konke."
(UDwight D. Eisenhower)
(b) "Xa uMnu Arable ebuyela endlwini engxenyeni ye- _____ kamva, wayithwala ikhabhoksi phantsi kwengalo yakhe."
(c) Kwaye kukho ukukhanya emagumbini kamama kwaye sava uyise ehla ehholo, phantsi kwezitebhisi zasemva, kunye noCaddy kwaye ndaya kwihholo. isandi. "
Skrolela phantsi ngeempendulo apha ngezantsi:
(a) "Izicwangciso azikho , ukucwangcisa konke." (UDwight D. Eisenhower)
(b) "Xa uMnu. Arable ebuyela endlwini engxenyeni yeyure kamva, wayithwala ikhabhoksi phantsi kwengalo yakhe."
(c) "Kwakukho ukukhanya ekamelweni likamama kwaye sava uyise ehla ehholo, phantsi kwezitebhisi zasemva, kunye noCaddy kwaye ndaya kwihholo.
Umgangatho wawubanda. Iinzwane zethu zijikiweyo ukusuka phantsi ngelixa sasiphulaphule isandi. "
I-Aisle, ndiza, kunye ne-Isle: Amagama aqhelekileyo adidekile
INkulumbuso kunye neNkulumbuso
Ukungena kunye neZithuba
I-Tennessine Facts - Element 117 okanye Ts
Ziziphi iingxaki ezinxulumene nokuNokwenzeka?